သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်က သင့်ကို လှုံ့ဆော်ပါစေ | Let Bible Prophecy Motivate You! | Real Conversion
သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်က သင့်ကို လှုံ့ဆော်ပါစေ
မေလ ( ၂၀ ) ရက်၊ သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်းတွင်
ဟောကြားသော R. L. Hymers, Jr. ၏
“သို့ဖြစ်၍ ဤစကားများအားဖြင့် အချင်းချင်း တယောက်ကိုတယောက် သက်သာစေကြလော့။”
( ၁ သက် ၄း ၁၈ )
တမန်တော်ပေါလုက ဤကျမ်းပိုဒ်၌ “ချီဆောင်ခြင်း” အကြောင်း ဖော်ပြချက်ကို ပေး ထားသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းကိုလည်း ပေးထားသည်။
“သို့ဖြစ်၍ ဤစကားများအားဖြင့် အချင်းချင်း တယောက်ကိုတယောက် သက်သာစေကြလော့။” ( ၁ သက် ၄း ၁၈ )
“နှိမ့်သိမ့်ခြင်း” ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် ဂရိစကားလုံးမှာ “ပါရာကာလဲယိုး” ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ “နှိမ့်သိမ့်ခြင်း” နှင့် “ခွန်အားပေးခြင်း” ဖြစ်သည်။ (NIV)
ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုလုံးမှာ အပိုဒ်ငယ် ၁၃ မှ ၁၇ အထိဖြစ်ပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က ဤကာလ၏အဆုံးပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်တို့၏ “ချီဆောင်ခြင်း” အကြောင်းကိုပေးထားသည်။ သက်သာလောနိတ်မြို့တွင်ရှိကြသော ခရစ်ယာန်များသည် ရောမနတ်စားများမှစ၍ မယုံ ကြည်သောယုဒလူမျိုးတို့၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရကြမည်။ အချို့တို့က သေကြမည်။ မာတုရသေခြင်းဖြင့် သေကြမည်ဖြစ်သည်။ သက်သာလောနိတ်မြို့တွင်ရှိသော လူများကို ဤ အရာက ဒုက္ခပေးသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပေါလုက သူတို့ကိုခွန်အားပေးရန် “ချီဆောင်ခြင်း“ အ ကြောင်းပြောသည်။ ဒေါက်တာ Hale က “ချီဆောင်ခြင်း” အကြောင်း ရှင်းလင်းချက်ကို အောက်ပါအတိုင်းပေးထားသည်။
“ထိုအခါ အသက်ရှင်၍ ကျန်ကြွင်းသော ငါတို့သည် အာကာသ ကောင်းကင်၌ သခင်ဘုရားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းငှါ၊ ထိုသူတို့ နှင့်တကွ မိုဃ်းတိမ်ပေါ်သို့ ချီဆောင်ခြင်းက ုိခံရသောအားဖြင့် သခင်ဘုရားနှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်၍၊ ဤ စကားများအားဖြင့် အချင်းချင်း တယောက်ကိုတယောက် သက် သာစေကြလော့။” ( အသုံးချဓမ္မသစ်အနက်ဖွင့်ကျမ်း၊ ၁ သက် ၄း ၁၇၊ ၁၈ မှတ်စု )
ကျွန်တော်က ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အခြေခံပြီး တရားဟောမည်။ အခြားအချိန်တွေထက် “ချီဆောင်ခြင်း” အကြောင်းကို ပြောပြမည်။ ယနေ့ည ကျွန်တော့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ သမ္မာ ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်သည် ကျွန်တော်တို့အား နှိမ့်သိမ့်ရန်နှင့်ခွန်အားပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း ကို ပြသရန်ဖြစ်ပါသည်။
၁။	ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းနိမိတ်က ခွန်အားကိုပေးသည်။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကမ္ဘာကြီးက ဖရိုဖရဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ် လောက်ကဖြစ်သည်။ အနုမြူမီးလောင်ကျွမ်းမှုကို အမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့နေရသည့် အခြေအ နေဖြစ်သည်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ကို အချိန်မရွေး ဗုံးဖောက်ခွဲမှုပြု နိုင်သည်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲလည်း ဆက်လက်ပြင်းထန်နေသည်။ ကြောက်စရာကောင်းလှ သည်။ သေပြီး ကမ်းပါးတွင် အလောင်းပစ်ချခံရနိုင်ပါသည်။ စစ်ပွဲက အဆုံးမရှိ။ အကျိုးလဲ မရှိ ပေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အခြေခံဘွဲကိုလည်း အလျှင်အမြန်ပြီးချင်သည်။ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုလည်း ဖြစ်သေးသည်။ ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဗင်းရှင်းအတွင်း ချီကာဂို၌ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများစွာ ဖြစ် ပေါ်ခဲ့သည်။ John F. Kennedy လည်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်။ Bobby Kennedy, Dr. Martin Luther King, Malcolm X, နှင့် George Wallace တို့သည် သူတပါး၏လုပ်ကြံခံရမှုကြောင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းခဲ့ရသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဝုတ်စထုတ်၊ ဘစ်တဲလ်၊ နှင့်အရှေ့ပိုင်းဘာ သာရေး၊ နှင့်နတ်ဆိုးနှင့်စာတန်တို့၏တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်း ရှိသေးသည်။ ဟိုင်းပီးများပြောဆို သည်အတိုင်း “ကျွန်တော့်စိတ်ကို လေလွင့်စေသည်။” ကြောက်ရွံ့မှုများ အလွန်အကျွံ ကြုံ တွေ့နေရသော အချိန်ကာလပင်ဖြစ်ပါသည်။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့် ထိုအချိန်ကာလတွင် ကျွန်တော့်စိတ်နှလုံးသည် ခရစ်တော် ပြန်လည်ကြွလာမည့် “နိမိတ်လက္ခဏာများ” ကြောင့် ခိုင်ခံသည်။
အမှောင်ညအချိန် အပြစ်တရားက စစ်ခင်းထား
သခင် ပြန်လာမည့် အရိပ်နိမိတ်များ ယခုတွေ့
စိတ်နှလုံးနိုးထလာ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းများ ယိုဖိတ်လာ။
ကျွန်တော်နှင့်အတူ သီချင်းစာပိုဒ်တစ်ခုကို အတူတကွ သီဆိုကြပါစို့။
( “သူ တဖန်ပြန်လာမည်” Mabel Johnston Camp, ၁၈၇၁-၁၉၃၇ )
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကိုခွန်အားပေးသော “နိမိတ်လက္ခဏာ” အချို့ကို ဖော်ပြလိုက် ပါသည်။
( က ) အစ္စရေးနိုင်ငံကို ၁၉၄၈ တွင် တည်ထောင်သဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဂျူးလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်ပေးထားသော တိုင်ပြည်သို့ ပြန်သွားကြသည်။
ယေရှုက “သူတို့သည် ထားဘေးဖြင့် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ အခြားသော ပြည်အရပ်ရပ်သို့ ဘမ်းသွားကြလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုးသားတို့သည် မိမိတို့အချိန်ကာလမပြည့်စုံမှီတိုင်အောင် ယေရုရှလင် မြို့ကို ခြေနှင့်နင်းကြလိမ့်မည်” ဟု မိန့်တော်မူသည်။ “အချင်း၊ ငါ၏ လူတို့၊ သင်တို့ သင်္ချိုင်းတွင်းများကို ငါဖွင့်၍ သင်တို့ကိုထုတ်ပြီးလျှင် ဣသရေလပြည်သို့ပို့ဆောင်မည်။” ( ယေဇ ကျေ ၃၇း ၁၂ ) “ကြာ မြင့်စွာ ကာလလွန်ပြီးမှ သင်သည် အုပ်ချုပ်ရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ ထားဘေးနှင့်လွတ်၍ လူ အမျိုးမျိုးထဲက နှုတ်သောပြည်သား၊ ကြာမြင့်စွာဆိတ်ညံလျက်နေသော ဣသရေလတောင်တို့ အပေါ်သို့၊ တဖန်ဆောင်ခဲ့သောပြည်သားတို့ရှိရာသို့ နောင်ကာလ၌သင်သည် စစ်ချီ၍လာ လိမ့်မည်။” ( ယေဇကျေ ၃၈း ၈ ) သမ္မတထရန့်က ယေရုရှလင်မြို့ကို လွန်ခဲ့သောရက်အနည်း ငယ်က ဣသရေလနိုင်ငံ၏မြို့တော်အဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ ဂျူးလူမျိုးများ၏ ဣသရေလသို့ ပြန်လည်ခြေချခြင်းက ကျွန်တော်တို့သည် ဤကာလ၏အဆုံးပိုင်းနှင့်ခရစ်တော်တဖန်ကြွလာ မည့်အချိန်ဆီသို့ ရောက်နေကြသည်ဟူသော ခိုင်မာသည့်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဟာလေလုယာ။ ခရစ်တော်ဘုရား အလျှင်အမြန်ကြွလာတော်မူပါ။
( ခ )) ခရစ်ယာန်များနှင့်ဂျူးလူမျိုးများအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတိုးပွါးလာခြင်းနှင့်ဆိုင် သည့် “နိမိတ်”။
The “sign” of an increased persecution of Christians and Jews.
“ထိုကာလ၌လူများတို့သည် သင်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်း အသေသတ်ခြင်းကို ခံစေခြင်းငှါ အပ်နှံကြလိမ့်မည်။ ငါ၏နာမကြောင့်လည်း ခပ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည် သင်တို့ကို မုန်းကြ လိမ့်မည်။” ( မဿဲ ၂၄း ၉ ) မွတ်စလင်လူမျိုးတို့၏ဦးတည်ချက်မှာ အစ္စရေးနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီး ယင်းနိုင်ငံရှိ ဂျူးလူမျိုးများကို မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ACLU သည် အသင်းတော်များတိတ်ဆိတ်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာလည်း အားယုတ်လာစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သမျှကို လုပ်နေကြသည်။ ဓမ္မပညာ “အစထိုးမှု” နှင့်ဆိုင်သည့် တိုးပွါးမှုလည်း နေ့ချင်းညချင်းဖြစ်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရသော ကတိတော်တိုင်း သည် ခရစ်ယာန်များအတွက်ဖြစ်သည်ဟုသော ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူတို့က ကျိန်ခြင်းအားလုံးသည်ကား ယုဒလူမျိုးများအတွက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပြုပြင်အသင်းတော်အများစုက ဂျူးမုန်းတီးရေးဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသစ်အဆန်းပုံစံကို ဆုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင် ကူမတော်မူပါ။
ဤပရောဖက်ပြုချက်က ကျွန်တော်တို့ကို တွန်းအားပေးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆို သော် ဤပရောဖက်ပြုချက်သည် ကျွန်တော်တို့မျက်စိရှေ့တွင် ပြည့်စုံလာမည်။ ဘုရားသခင် သည် အစိုးပိုင်းသော ဘုရားဖြစ်ပါသည်။
(ဂ )	နောက်ဆုံးကာလမှားယွင်းမှုပေါ်လာခြင်း
“ထိုနေ့ရက်မရောက်မှီ ဖောက်ပြန်သင်းခွဲခြင်း [ “အယူဝါဒစွန့်ပယ် ခြင်း” - Criswell] သည် အရင်ဖြစ်၍၊” ( ၂ သက် ၂း ၃ )
“မိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည် ပေါ်လာ၍ု လူအများတို့ကို လှည့်ဖြားလိမ့်မည်။ မတရားသော အမှုတို့သည် များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” ( မ ဿဲ ၂၄း ၁၁-၁၂ ) ဤအချက်က နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ပေါ်လာမည့် ဘုရားမဲ့အသင်း တော်များကို ရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ပေါ်လာမည့် မိစ္ဆာဝါဒ သည် နတ်ဆိုးဝါဒမှစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ဝိညာဉ်တော်သည် အတိအလင်းဗျာဒိတ်ထားတော် မူသည်ကား၊ နောင်ကာလ၌ ဩတ္တပစိတ်တွင် သံပူနှင့်ခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင် မုသာစကားကို ပြောတတ်သောသူတို့၏ လှို့ဝှက်ခြင်းအားဖြင့်၊ လူအချို့တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍၊ လှည့်ဖြားတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌၎င်း၊ နတ်ဘုရားတို့နှင့်စပ်ဆိုင်သော ဩဝါဒတို့၌၎င်းမှီဝဲ ဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်။” ( ၁ တိ ၄း ၁၊ ၂ ) နောက်ဆုံးသောကာလ၌ပေါ်သော မှားယွင်းသော အယူဝါဒသည် သမ္မာကျမ်းစာကိုငြင်းပယ်သည့် မပြောင်းလဲသော အမှုတော်ဆောင်များမှ စတင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ “ဓမ္မပညသစ်” နှင့် “ကိုယ်ကျင့်တရားသစ်” တို့ကို ဤမိစ္ဆာများကို ဖြစ် ပေါ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် အသင်းတော်တို့ကိုဖျက်ဆီးပြီး မယုံကြည်သူများနှင့်ပြည့်စေသည်။ Charles G. Finney မှစတင်သော ဤလုပ်ငန်းသည် ယခုထိ ကြီးထွားလာပြီး အသင်းတော် ကြီးများကိုပင် ထိန်းချုပ်လာသည်။ ကွန်ဆာဗေ့တစ်အသင်းတော်များကိုပင်လျှင် ထိခိုက်မှုရှိ လာသည်။ “မိစ္ဆာအယူ” က ဗျာဒိတ် ၁၇ တွင် တွေ့ရသည်အတိုင်း နောက်ဆုံးတွင် “အမင်္ဂ လာကြီး” ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ “ပုဒ်ရဟန်းဦးဆောင်မှုအောက်တွင်ရှိသော ဖောက်ပြန်ရေးသမားများ၏ခရစ်ယာန်နယ်ပယ်” ဟု ဖြစ်သည်။ (Scofield)
လက်ရှိဦးတည်ချက်များက ငယ်ရွယ်သောအချိန်က ၄ % သော ဆယ်ကျော်သက် များသာလျှင် ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြောင်းကို ပြသသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယနေ့ခေတ်၌ ၃၄ % သော ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်များတွင် အနာဂတ်၌ ၄ % လောက်ကိုသာ အားကိုးရမည် ဖြစ်သည်။ “ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာပျက်ကိန်းဆီသို့ဦးတည်နေသည်။” (Dr. Jack W. Hayford, ဩဂုတ် ၁၆၊ ၂၀၀၆ ) John S. Dickerson ရေးသားသည့် “ဧဝံဂေလိ အသင်းတော်ကြီး၏ဆုတ်ယုတ်မှု” ကိုကြည့်ပါ။ “အမေရိကန်အသင်းတော်ကို ပျက်စီးသော သည့် အချက် ခြောက်ချက်ရှိသည်။” ယင်းသည် Dickerson ရေးသားသောစာအုပ်၏ ခေါင်း စဉ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းသောဆယ်ကျော်သက်များသည် ခရစ် ယာန်မိသားစု၌ ကြီးထွားလာကြသော်လည်း အထက်တန်းပညာပြီးဆုံးကြသောအခါ ခရစ် ယာန်တစ်ယောက်ကဲ့သို့ ဆက်လက်အသက်ရှင်ခြင်းမရှိကြတော့ပါ။ များမကြာမှီတွင် ကျွန်ုပ် တို့လူမျိုးသည် သူတို့၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင် ရှိရမည်။ မိစ္ဆာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လုံးလုံးဖြစ်သွားနိုင်သည်။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ လက်တွေ့အသုံးချခြင်း
ဧဝံဂေလိအသင်းတော်အနည်းစုကသာ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှောက်တွင်ရှိသော စိုးရွံ့ ဖွယ်အခြေအနေအကြောင်းကို ဟောပြောကြသည်။ သို့ရာတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်အ ကြောင်းကို မသိကြပါ။ မည်သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်မျှ လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ဟု ထင်ရပါ သည်။ ကျွန်တော်တို့၏နိုင်ငံသာဖြစ်ခြင်းသည် တစစီကွဲပျက်သွားသည်။ ကျွန်တော်တို့၏လူ ငယ်များသည် လူရိုင်းများဖြစ်လာကြတော့သည်။ စိတ်ကူးယဉ်ထဲတောင်မမျှော်လင့်ဖူးသော ဆိုးယုတ်မှုသည် ကျွန်တော်တို့ကို စောင့်လျက်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် အသေး အမွှားကစ၍ အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ထားရမည်။ ကနဦးခရစ် ယာန်များကို တိုက်ခိုက်သော ရောမမိစ္ဆာအယူရှိသူများကဲ့သို့ မိစ္ဆာဝါဒသမားများက ဘက် ပေါင်းစုမှနေပြီး ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ကြပါသည်။ ၁ သက်သာလောနိတ် အခန်းကြီး တစ်၊ အငယ် ငါးဆီသို့ ပြန်၍သွားကြပါစို့။
“ဧဝံဂေလိတရားသည် သင်တို့၌ စကားသက်သက်ဖြစ်သည်မ ဟုတ်၊ တန်ခိုးနှင့်၎င်း၊ ….” ( ၁ သက် ၁း ၅ )
အချိန်ကာလသည် တိုတောင်းလျက်ရှိပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကို “ပျက်ရယ်” ပြုရ လောက်အောင် မမိုက်ရိုင်းလောက်ပါဘူး။ လူငယ်တို့၊ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို လက်ခံရုံ သက်သက်မပြုကြပါနှင့်။ စစ်မှန်သော ပြောင်းလဲခြင်းကို လိုလားကြပါ။စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန် အသက်တာကို ရှာဖွေကြပါ။
အပိုင်ငယ် ၉ ကို ကြည့်ကြပါစို့။
“ငါတို့သည် သင်တို့အထဲသို့ အဘယ်သို့ဝင်ကြသည် အကြောင်းအ ရာကို သူတို့သည် ကိုယ်တိုင်ကြားပြောကြ၏။ အသက်နှင့်ပြည့်စုံ လျက် မှန်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကို သင်တို့သည် ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ၊” ( ၁ သက် ၁း ၉ )
ရုပ်တုကိုးကွယ်သောဘဝမှ ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လာပါ။သင်တည်ရှိနေခြင်းအသက်တာလေး ဖြင့် အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကို အစေခံပါ။
အချိန်ကာလက တိုတောင်းလျက်ရှိသည်။ အန္တီခရစ်လည်း ပေါ်လာသည်။ ခရစ်ယာန် တစ်ယောက်ဖြစ်သည်မှာ ဘဝတွင် ပေးဆပ်မှုရှိနိုင်သည်။ ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းမှပြန်လာပါ။ အ သက်ရှင်သောဘုရားကို ယခုအစေခံပါ။ အပိုဒ်ငယ် ၁၀ ကိုကြည့်ကြပါစို့။
“ရောက်လတံ့သောဘေးဒဏ်မှ ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်သော သခင်ယေရှု တည်းဟူသော သေခြင်းမှ ဘုရားသခင်ထမြောက်စေတော်မူသော သားတော်သည်၊ ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည်အရာကို ငံ့ လင့်နေခြင်းငှါ။” ( ၁ သက် ၁း ၁၀ )
လာလတံ့သော ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မှကယ်တင်မည့် သားတော်ယေရှုကို မျှော်ကြည့် ကြပါစို့။ သူသည် ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းကြွလာမည့် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်။ သင်းအုပ်ဆရာ Wurmbrand ရေးသားသော “ခရစ်တော်အတွက် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်း” စာ အုပ်ကိုဖတ်ပါ။ခရစ်တော်အတွက် ဒုက္ခဝေဒနာခံရန် အသက်ရှင်သောသူကဲ့သို့နေထိုင်ပါ။ ပျောက်ဆုံးသောကမ္ဘာထဲက ထွက်လာပါ။ ပျောက်ဆုံးသောမိတ်ဆွေများကို အသင်းတော်သို့ ခေါ်ဖိတ်ပါ။ သို့ရာတွင် သင်ကိုယ်တိုင် ခရစ်တော်ထံသို့မလာလျှင် ကျောက်တုံးပေါ် သူတို့ကို ချသည်နှင့်အခြားဖြစ်နေမည်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွင် သင့်မိတ်ဆွေများကို ကယ်တင် ခြင်းခံကလေးများအနေဖြင့် ဖြစ်စေပါ။ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အတူတကွ စုရုံးပါ။ သင်သည် ဧဝံ ဂေလိခရီးသွားလျှင် နာမတော်ကိုဆောင်ယူပါ။ ဘုရားသခင်အဖို့ အသက်ရှင်ပါ။ ခရစ်တော်အ ဖို့အသက်ရှင်ပါ။ အချိန်ကာလသည် တိုတောင်းလျက်ရှိသည်။ တရားစီရင်ခြင်းသည် အလျှင် အမြန်လာတော့မည်။ “သင်ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်နှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါ။ အချိန်မနှောင်းခင် ယခုလုပ်ဆောင်ပါ။ Charles Studd က ဤသို့ဆိုပါသည်။
ခရစ်တော်အား မိမိအသက်တာတစ်ခုလုံးကိုပေးပါ။ ပြန်ယူစရာ ဘာမျှ မရှိပါ။ ယေရှု သင့်ကိုချစ်သည်။ သင့်ကို အမှန်တကယ်ချစ်သည်။ ယေရှု သင့်ကိုချစ်သည်။
သင်တို့၏သီချင်းစာရွက်တွင်ရှိသော ဓမ္မသီချင်းနံပါတ် ၅ ကို အားလုံး မတ်တပ်ရပ်ပြီး သီဆိုကြပါစို့။ အတူတကွ သီဆိုကြပါစို့။
ယုံကြည်သူတို့နားထဲ ယေရှုနာမတော် အလွန်ပင်ချိုသာ၊
ဝမ်းနည်းခြင်းများကို ဘေးဖယ်၊ နာကျင်ခြင်းများချုပ်ငြိမ်းစေ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်း ပျောက်ကင်းစေ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းများ ပျောက်ကင်းစေ။
ချစ်သောနာမ၊ ငါတည်ဆောက်ရာကျောက်၊ ကျွန်ုပ်ခိုလှုံရာရဲတိုက်ပေ၊
ယေရှု၊ သိုးထိန်းရှင်၊ ညီအစ်ကို၊ မိတ်ဆွေ၊ ပရောဖက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်ရှင်ဘုရင်၊
ကျွန်ုပ်သခင်၊ ဘ၀၊ လမ်းခရီး၊ အဆုံးစွန်သော၊ ချီးမွမ်းခြင်းကို ပူဇော်ပါ၏၊
အားနည်းခြင်း၊ စိတ်နှလုံး၏အစွမ်း၊ နွေးထွေးမှုများ အေးစက်သော်လည်း၊
ကိုယ်တော်ကို အရှိအတိုင်းမြင်ခါ၊ တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ်တော့်ကိုချီးမွမ်းမည်၊
အသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့ထံ ကိုယ်တော်အကြောင်း ကြားပြောမည်။
ကိုယ်တော့်ကိုချီးမွမ်းခြင်းတေးသံသည် သေခြင်းတွင်းရှိ စိတ်ဝိညာဉ်လန်းစေ၊
( “ယေရှုနာမ ဘယ်မျှချိုသာ” John Newton, ၁၇၂၅-၁၈၀၇၊
“ခမ်းနားထည်ဝါမှုစည်းစိမ် သရဖူဆောင်း” သံစဉ်ဖြစ်သည်။ ).
“ခရစ်တော်ပြန်လာမည်၊” (H. L. Turner, ၁၈၇၈ ရေးစပ်သည်။ ).
သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်က သင့်ကို လှုံ့ဆော်ပါစေ အကျဉ်းချုပ်
(က) အစ္စရေးနိုင်ငံကို ၁၉၄၈ တွင် တည်ထောင်သဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဂျူးလူ မျိုးများသည် ဘုရားသခင်ပေးထားသောတိုင်းပြည်သို့ ပြန်သွားကြသည်။ လုကာ ၂၁း ၂၄၊ ယေဇကျေ ၃၇း ၁၂၊ ၃၈း ၈။
(ခ) ခရစ်ယာန်များနှင့်ဂျူးလူမျိုးများအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတိုးပွါးလာခြင်းနှင့် ဆိုင်သည့် “နိမိတ်”။ မဿဲ ၂၄း ၉။
(ဂ) နောက်ဆုံးကာလမှားယွင်းမှုပေါ်လာခြင်း၊ ၂ သက် ၂း ၃၊ မဿဲ ၂၄း ၁၁၊ ၁၂၊ ၁ တိ ၄း ၁၊ ၂။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ လက်တွေ့အသုံးချခြင်း၊ ၁ သက် ၁း ၅၊ ၉၊ ၁၀။